Juunyo | 2017 | WEEJIDOW | Baal 2
Archive for Juunyo, 2017
War hadda soo dhacay: Dagaal Culus oo ka dhacay Duleedka Degmada Mahadaay ee Gobolka Sh.Dhexe
Juunyo 27, 2017
WAAJIDPRESS – 27 JUN 2017:
Wararka laga helayo Gobolka Sh.Dhexe ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ay weerar xoogan ku qaadeen Degaano ay gacanta ku hayaan Xubno ka tirsan Xarakada Al Shabaab.
Ciidamada Dowladda ayaa inta aysan Shabaab la dagaalamin waxa ay si nabadgelyo ah kula wareegeen Cali-fooldheere iyo Qurac-madoobe, kadibna Alshabaab ayaa dagaal ku soo qaaday halkaasna waxaa ka dhacay dagaal qaraar sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka.
Abaanduulaha Ciidamada Dowlada Gen. C/laahi Cali Caanood (oo ka soo jeeda beesha MAREEXAAN) ayaa horkacaya Howlgalka ka soconaya Bariga Gobolka Shabellaha Dhexe, waxaana ku wehlinaya Saraakiil Midowga Afrika ka tirsan.
Xaalada degaanadaas ayaa laga soo sheegayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo saan saan dagaal, waxaana dadka deegaanka ka cabsi qabaan inuu saameyn ku yeesho dagaalada saakay ka qarxay degaano ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe.
SOOMAALIYA OO dhan OO WELI Ka go’an yahay Adeega Internat- ka
Muqdisho – Adeegga Internet-ka Soomaaliya ayaa ka maqan gobollada koonfurta maalinkii afaraad oo xiriir ah, waxaana muuqata qalad weyn oo Soomaaliya ka jira, oo dhaliyey saameyn ballaaran.
Maqanaanshaha internet-ka ayaa yeeshay saameyn xooggan, islamarkaana sababay inay istaagaan adeegyadii guud ee aas-aasiga ah ee dalka, maadaama internet-ka hal meel ka yimaado.
Internet-ka oo ah nooca Viber Optic ayaa waxaa keena fiilo weyn oo badda soo marta, taasi oo la sheegay inuu jaray Markab badda marayey.
Waxaa intaas dheer, in dadku aysan awoodin inay la xiriiraan ehalladooda dibedda ama aqristaan wararka waxa ka socda guud ahaan Soomaaliya iyo caalamka, oo ku xiran net-ka.
Warbaahin badan ayaa awoodi weysay inay wararka geliyaan website-yada, si ay u aqristaan dadka qurbaha jooga, inkasta oo Websites qaar ay adeegsaneyaan taleefanno wararka loogu soo gudbiyo, kadibna laga qoro dibedda, halka markii hore gudaha laga soo qori jiray.
War deg deg ah: Maxkamad ku taala oo ogolaatey qeyb Ka mid ah Amarada uu Trump ku mamnuucey Muslimiinta soo gala MARAYKANKA
Juunyo 26, 2017
WAAJIDPRESS – 26 JUN 2017:
Washington DC – Maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah ogolaatay in qeyb xaddidan oo ka mid ah xayiraaddii socdaalka ee Madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka u dhashay lix waddan oo Muslim ah ay dhaqan galaan, isla markaana ay Maxkamaddu eegi doonto awoodda guud ee Madaxweynaha ee arrimaha socdaalka bisha October.
Lixdan dal ayaa kala ah Soomaaliya, Syria, Iran, Sudan, Yemen iyo Libya, kuwaas oo dadkooda dhammaan ama badankood ay yihiin muslimiin.
Maxkamadda ayaa ogolaatay in dalka laga mamnuuco dadka aan wax xiriir ah la lahayn dal ama hay’ado ku sugan dalka Mareykanka.
Garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo ka tirsan sharci yaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, ayaa idaacadda VOA u faahfaahiyey go’aankan.
War deg deg ah DAAWO: BEESHA MURUSADE OO MAANTA XILDHIBAANADOODA KU JIRA BAARLAMAANKA SOOMAALIYA KALSOONIDII KALA LAABTEY
Kulan ay magaaladda Muqdisho Maanta ku yeesheen waxgaradka Beesha Murusade oo kamid ah beelaha Hawiye ayaa waxaa ay kalsoonidii kala laabteen xildhibaanada beeshaas umatala barlamaanka Soomaaliya – DAAWO:
War deg deg ah: Moshin lagu Ridaayo Raisul Wasaare Kheyre iyo ………
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa la filayaa inuu labada bisha July uu socdaal kale ku tago magaalada Addis-Ababa ee dalka Ethiopia, oo dhowr toddobaad ka hor un uu kasoo noqday.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in socdaalka Kheyre uu salka ku hayo cadaadis siyaasadeed oo soo wajahay, islamarkaana uu asaga dalbaday inuu la kulmo ra’iisul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn.
Kheyre, ayaa waxaa kusoo wajahan mowjado siyaasadeed, ayada oo la filayo in mooshin xil ka qaadis laga gudbiyo marka uu furmo kalfadhigga baarlamanka, sideedda bisha July, waxaana la sheegay inuu caawimaad ka raadinayo Ethiopia.
Waxaa jira tuhunno ku saabsan in mooshinkan ay ku lug leedahay Ethiopia, taasi oo Kheyre uu doonayo inay ka caawiso in la damiyo.
Mooshinka ayaa waxaa sidoo kale ku lug leh siyaasiyiin ay ka mid yihiin Shariif Xasan Sheikh Aadan, oo xildhibaano badan ku leh baarlamanka, iyo Cumar Cabdirashiid, oo wakil ka ah dowladda Imaaraadka.
Imaaraadka, ayaa sidoo kale la tuhmayaa inay qeyb ka yihiin mooshinkan, waxaana maalmihii dambe Muqdisho laga dareemayey xildhibaano ku xiran Imaaraadka oo mooshinka gadaal ka riixaya.
Haddii Ethiopia ay ka caawiso Kheyre daminta mooshinka, waxaa taas ay ka dhignaan doonto, inuu si rasmi ah u noqon doono siyaasi ku xiran kana amar qaata Addis-Ababa.
DAAWO: GUDOOMIYAHA DEGMADA WAAJID OO KA HADLEY IN AY XAALAD NOLOL ADAG KA JIRTO MAGAALADA
Dowladda oo sheegtay in adeegga Internet uu dhawr cisho maqnaan doono
Juunyo 25, 2017
WAAJIDPRESS – 25 JUN 2017:
Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta Somaliya, ayaa ka hadashay adeegga Internet-ka ee ka maqan Gobolada Koonfurta & Bartamaha Somaliya, tan iyo xalay.
Adeeggan oo inta badan ay bixiyan shirkado ay ka mid yihiin Hormuud, Global iyo Somtel, ayaa caweysnimadii xalay mar qura laga war helay in uu go’an yahay.
Axmed Xaaji Cabdi, Agaasimaha Wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta oo la hadlay Warbaahinta gudaha, ayaa sheegay in cilad ay ku timid Internet-ka, ka dib markii uu markab jiiray barta ay ku kulmaan laba cable oo Internet ah, oo Somaliya uga kala yimaada Wadamada Jabuuti & Kenya.
“Fiillooyin cable ah oo nooga kala yimaado Kenya iyo Jabuuti, meel ay iska galaan ayuu markab jiiray, markab kale ayaa loo soo diray oo samaynayo.” Ayuu yiri Agaasimaha.
Agaasimaha, ayaa intaa ku daray in hagaajinta Internet-ka ay qaadan doonto muddo dhawr cisho ah, taasoo sida uu muujiyay caqabad ku ah dowladda iyo shacabkuba.
Axmed Xaaji, ayaa iftiimiyay in Xafiisyada Madaxweynaha Somaliya & Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda ay u xaniban yihiin adeegga Internet-ka ee go’an.
Tan iyo xalay, ayay Internet la’aan ka jirtay magaalooyinka iyo degmooyinka dhaca Koonfurta & Bartamaha Somaliya, taasoo ka careysiisay qaybaha bulshada.
Magaalada Muqdisho oo kale oo si weyn looga isticmaalo adeegga Internet-ka, ayaa waxaa dadka saamayn ku yeeshay maqnaanshaha adeegaasi.
Tani waxay ku soo beegmaysaa, iyadoo ay maanta ahayd maalintii 1-aad ee Ciidul Fitriga. Dad badan oo qoysaskooda, eheladooda iyo asxaabtooduba doonayay in ay kula xiriiran barraha bulshada munaasabadda Ciidul Fitriga awgeed, ayaynaan taasi u suuragelin.
DAAWO: RW Kheyre oo Fariintii Ciida Ugudbiyay Shacabka, Laakiin Digniin & Baaq ayuu udiray
Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa bulshadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay bilshada Bisha Shawaal isagoo Allah ka baryay in ciidaan teeda kale ku gaarsiiyo nabad iyo Barwaaqo.
Laakiin, waxaa uu soo saaray digniin ku aadan in kooxda Shabaab ay gaysan karaan dhibaato loo geysto shacabka xilliga maalmaha farxadda.
War deg deg ah: Qarax caawa MUQDISHO Ka dhacay iyo Taliyihii ciidamada Gobolka GEDO oo la diley
Juunyo 24, 2017
WAAJIDPRESS – 24 JUN 2017:
Wararka caawa naga Soo gaaraya Xaafadda Aargada ee Degmada Wadajir ee Muqdisho ayaa ku waramaya in qarax miino uu halkaas ka dhacay.
Qaraxan oo ahaa bambaanada gacanta laga tuuro ayaa lagu soo waramayaa in Caawa uu ku geeriyooday hal Ruux, kaasi oo ku sugnaa nawaaxiga Xaafada Aargada ee Degmada Wadajir ee Magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in sidoo kale uu jiro dhaawaca labo Ruux oo Shacab ah ka soo gaaray Qaraxaasi.
Dhinaca kale, Wararka laga helayo Magaalada Ceelwaaq ayaa sheegaya in Kooxo hubeysan halkaasi ay ku dileen Taliyihii Ciidamada Dowladda ee Gobolka Gedo.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Dowladda qaarkood oo la hadlay Idaacaddaha Shabelle , WAAJIDPRESS iyo kuwa kale ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Dabley hubeysnaa ay toogasho ku dileen Taliyihii Ciidamada ee Gobolka Gedo, Cabdirashiid Barre Gurxan.
ALLAHA U NAXARIISTO Marxuumka ayaa lagu dhex toogtay hooygiisa oo ku yaalla Magaalada Ceelwaaq kadib markii ay weerareen Dabley ku hubeysnaa bistoolado, sida ay sheegayaan Saraakiishan.
War cusub: Wasiir ka tirsan Somaliland iyo Ciidamo uu wato oo tagay Degmada Qardho ee Boosaaso
Qardho–KNN–Wasiirka wasaarada kaluumaysiga iyo khayraadka bada Somaliland Cali jaamac Faarax (CaliBuureed) (oo Ka soo jeeda Beesha Warsengeli – Daarood), ayaa gaaray Magaalada Qardho ee Gobolka Bari ee Puntland.
Wasiir Cali oo watay ciidan ilaalo ah oo aad u faro badan ayaa safarkiisa ka soo bilaabay Magaalada ceerigaabo wuxuuna safar dhulka ah ku soo maray deegaano badan oo puntland ah gaar ahaan gobalada ay puntland ula baxday hayland iyo karkaar sida Magaalooyinka baraagaha , Xilgalool , Dhahar, xeradaamuudal, sanjilbo iyo magaalada Qardho oo uu ugu danbayn wasiirku soo gaaaray sida ay sheegtay Warbaahinta ka Howlgasha Degaanada Puntland.
Cali Buureed ayaan la kulmin intii uu safarkiisa ku jiray cid ka tirsan maamulka puntland oo wax ka waydiisay ujeedka safarkiisa iyo sababta uu qardho u yimid, waxaana uu degay markii uu gaaray magaalada Qardho hotelka caanka ee Ala’aamin kaas oo ku yaal faras magaalaha islamrkaasna ah goob inta badan lagu falanqeeyo arimaha siyaasada Puntland.
Waxaana sida la sheegay uu dib ugu laabtay labo beri kadib habeenkii xalay Magaalada dhahar.
Puntland ay ku soo baraarugtay markii uu dib u ugu laabtay Wasiirka Kaluumeysiga Somaliland degmada Dhahar.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Juunyo, 2017.